Line Walker -2 ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ရိုက်ကွင်းနှင့် မလွတ်သော ဆိုင်အချို့ကို နှစ်ရက် ပိတ်သိမ်းစေပြီး နေ့?? - Yangon Media Group
Line Walker -2 ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ရိုက်ကွင်းနှင့် မလွတ်သော ဆိုင်အချို့ကို နှစ်ရက် ပိတ်သိမ်းစေပြီး နေ့??
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅
Line Walker -2 ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားရိုက်ကူးခြင်းငါးရက်မြောက်နေ့ကို ဖေ ဖော်ဝါရီ၂၅ရက်က ဆူးလေဘုရား လမ်း(မီးသတ်ရုံးရှေ့)တွင်ပင် ရိုက်ကူးခဲ့သည်။ ယင်းနေ့တွင် ကားများမောင်းနှင်ပြီး သေနတ်များပစ်ဖောက်သည့် ဇာတ်ဝင်ခန်းကိုပင် ရိုက်ကူးခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။
ဇာတ်ကားရိုက်ကွင်းသို့ လာ ရောက်ကြည့်ရှုနေသည့် ပရိသတ်တစ်ဦးက ”မကြည့်ဖူးလို့လာကြည့်တာ လူတွေကများတော့ ဘာမှမမြင်ရဘူး။ သေနတ်သံတွေပဲကြားရတယ်။ ကားဖောက်ခွဲမယ်ဆိုလို့ ကြည့်ချင်တာ။ ဒါမျိုးမကြည့်ဖူးဘူးလေ။ လူ တွေက တကူးတကကို လာကြည့်ကြတာ။ စိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်း ပါတယ်။ နေပူထဲမှာကို လာအားပေး နေကြတာ”ဟုပြောသည်။ ယင်းဇာတ်ကားရိုက်ကွင်းနှင့် မလွတ်သောမျက်မှန်ဆိုင်အချို့၊ စတိုးဆိုင်အစရှိသည်တို့အား နေ့တွက် စာငွေကြေးပေးပြီး နှစ်ရက်တာပိတ်သိမ်းစေထားကြောင်းသိရသည်။
ရွှေမန်းမျက်မှန်ဆိုင်ပိုင်ရှင်က ”ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာ သူတို့က ဒီနေ့ရယ်၊ မနက်ဖြန်ရယ်အတွက်ကို ဆိုင်ပိတ်ပေးဖို့လာညှိပါတယ်။ နောက်ကျွန်တော်ဆိုင်က မျက်မှန်ဆိုင်ဆို တော့ ပုပ်ကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းမဟုတ် တော့ သိပ်အများကြီးလည်းမတောင်းပါဘူး။ သူတို့က ကျွန်တော်ဆိုင်က မျက်မှန်ကျပ်တစ်သောင်းတန် ၁ဝ လက်ဝယ်ယူအားပေးပါတယ်။ ကျပ်တစ်သိန်းဖိုးဆိုတော့ ကျွန်တော်က တစ်ရက်ကို ကျပ်ငါးသောင်းရတဲ့ပုံစံ မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံကိုလာရိုက်တာကို အရမ်း သဘောကျကြိုဆိုပါတယ်။ အဲဒါ ကြောင့်လည်းကိုယ်တန်သလောက် ပဲယူပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားမို့လို့ မတရားယူချင်တာမျိုး စိတ်လည်းမရှိ ပါဘူး”ဟု ပြောသည်။
ရိုက်ကွင်းနှင့် မလွတ်သော ကြောင့် ရွှေမန်းမျက်မှန်ဆိုင်အပါအဝင် စတိုးဆိုင်နှင့်စားသောက်ဆိုင်အချို့ကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ရက်နှင့် ၂၆ရက် နှစ်ရက်တာ ပိတ်သိမ်းပေးထားရမည်ဖြစ်ပြီး ဆိုင်ရှင်များအားလည်း Line Walker -2 ရိုက်ကွင်း မှ နေ့တွက်ခအဖြစ် လုပ်ငန်းထိခိုက် မှုအပေါ်မူတည်ပြီး ပေးချေထား ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ရက် မှစတင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်အထိ ရိုက်ကူးသွားမည်ဖြစ်သည်။
ပူအယ်၏နေရာတွင် နည်းပြသစ်အဖြစ် ဆဲလ်တစ်နည်းပြ ရော်ဂျာကို လက်စတာ ပစ်မှတ်ထား
နာမည်ကျော် ကြက်ကြော်ဆိုင်မှ အလုပ်သမား မှုခင်းရဲဝန်ထမ်းများ Extreme Job
လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု၌ မွိုက်စ်ကိန်းတွင် လည်းတာဝန်ရှိဟု နောက်ခံလူ ဘိုနူချီ အံ့အားသင့်ဖွယ?
ပြင်သစ်နိုင်ငံ၌ နေရာအများစုတွင် အပူချိန်မြင့်တက်လာ၍ လိမ္မော်ရောင်အဆင့် ကြေညာထားရ
အစ္စရေးနိုင်ငံသား လျှောက်ထားခွင့်ရသောကြောင့် ဗြိတိန်သို့ အေဘရာမိုဗစ် ဝင်ထွက်ခွင့် ပြန်လည်?
အခြေခံပညာ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ဘတ်ဂျက်နှစ်ခါတောင်းပြီး တည်ဆောက်မည့် အပေါ် လက်မခံ